DEG DEG-Doodii musharixiinta oo maanta lagu kala tegey musharixiin kuraas isu qaatay+Faroole iyo Tarsan oo… | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
DEG DEG-Doodii musharixiinta oo maanta lagu kala tegey musharixiin kuraas isu qaatay+Faroole iyo Tarsan oo…
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu kahelayno magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya ayaa sheegaya inay baaqatay dood dhex mari lahayd musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya.
Warar hoose ayaa sheegaya in kooxda Villa Soomaaliya xalay amartay in lajaro dhammaan internetka Muqdisho laguna qanciyo macaamiisha inuu go’anyahay cablekii netka ee dalka Jabuuti, si aan dood live ah looga siidayn Tvga qaranka Soomaaliya.
Musharixiinta ayaa soo xaadiray goobtii doodu kadhici lahayd oo aan internet lahayn waxaana lagu wargeliyey inuu dalka dibaddiisa ku maqan yahay musharax Xasan Sheekh Maxamuud, dooduna ay duubis noqon doonto si hadhow faaf reeb loogu sameeyo.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in musharixiin ay kamid yihiin Dr Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole iyo Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ay diideen in la qabto dooda oo uu Xasan Sheekh ka maqan yahay.
Dhanka kalen waxa ay ka horyimaadeen in laqabto dood aysan shacabka Soomaaliyeed iyo barlamaanka codka bixinaya live u daawanayn, taasi oo sababtay in madasha lagu kala dareero.